Syria: Revolisiona Mandeha Amin’ny Fiteny Maro · Global Voices teny Malagasy
Syria: Revolisiona Mandeha Amin'ny Fiteny Maro
Voadika ny 16 Oktobra 2012 11:45 GMT
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherna ao Syria 2011/12 ity lahatsoratra ity .
Tsy hoe tery an-tanin'ady ihany akory no nàka toerana ny Revolisiona tao Syria, teo anelanelan'ny làlana tao Daraa na ny toeram-pitiliana ao Aleppo. Fa misy koa ny ady goavana atrehan'ireo mpifanandrina, na ny mpanohana ny fitondrana izany, na ny mpanohitra, ety anaty aterineto, ahitàna taratra ny ady tsy misy indra fo ifamelezan'ny andaniny sy ny ankilany.
Miaraka amin'ny aterineto izay saika azo idirana manerana izao tontolo izao mihitsy, dia niely eran-tany koa ny Revolisiona Siriana, miaraka amin'ireo vaovao miely faran'izay haingana arakaraka ny fisehoan'ny zava-mitranga eny an-kianja.
Ireo Siriana am-pielezana sy Sakaizan'ny Siriana (tsy ijerena izay fifamatorany) dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fanelezana vaovao tamin'ny fiteny samihafa isan-karazany.
Tao amin'ny Facebook, raha tsy hilaza ireo sehatra hafa, azontsika atoa ny mahita pejy an-jatonjatony sy vondrona amin'ny fiteny Grika, Alemana, Tiorka, Espaniola (eto sy eto), Italiana, Japoney … ary maro hafa.
Anatin'ireo pejy maro mendrika hotanisaina mikasika io fijery io ny “Syrian Revolution in the Languages of the World” na “Ny Revolisiona Siriana Amin'ny Fiteny Rehetra Manerantany” sy ny “Free Syrian Translators” na “Ireo Siriana Mpandikateny Malalaka “.
Pejy iray hafa isan'ny be mpitia ao amin'ny Facebook ny mitondra lohateny hoe “La Revolution Syrienne en Français” (Ny Revolisiona Siriana amin'ny Fiteny Frantsay) izay iezahan'ny tompony hiavàhana amin'ireo pejy hafa amin'ny alàlan'ny fitanisàna teninà avarapianarana, mpaka sary, mpanao sariitatra, mahaloko tsara ny zava-misy, hatramin'ny fanangonan-tsonia anaty aterineto.
Nitafatafa tamin'izy ireo izahay mba hahalalàna ny antony mandrisika azy ireo hanangana pejy toy izany amin'ny fiteny Frantsay manokana ary ny fomba eritreretin-dry zareo ho fandraisany anjara amin'ny revolisiona – amin'ny fomba virtoaly.
GV: Iza no ao ambadik'ilay pejy?
Olona efatra, roa lahy ary roa vavy, Siriana sy Frantsay avy ao anatiny sy avy any ivelany, izay tena resy lahatra tanteraka amin'ny antom-pisian'ilay revolisiona.
GV: Nahoana no nanapa-kevitra hanangana Pejy FaceBook iray ianareo?
Fitaovam-pifandraisana tena mahomby tsy misy toa azy hanatràrana marobe an'ireo olom-pirenena, Siriana na vahiny momba ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny firenenay, noravàna sy norotehan'ny fitondràna iray lian-drà sy baribariana.
GV: Mitodika amin'iza ity pejy ity? Nahoana no amin'ny teny Frantsay ilay izy?
Sary hosodokon'i Delacroix ahitàna ny Sainan'ny Revolisiona Siriana
Ho an'ny vondrom-piarahamonina rehetra miteny Frantsay, ny Siriana am-pielezana, ary ireo izay liana amin'ny revolisiona ataonay, na amin'ny fomba midadasika izany na bitika. Tsy voaisa ireo pejy voasoratra amin'ny teny Anglisy sy Arabo, nihevitra izahay fa rariny ihany koa raha ezahana tratrarina ny vondrom-piarahamonina miteny Frantsay. Tenim-pirenena vahiny faharoa ho an'ny Siriana maro ny teny Frantsay, fanampin'izay dia io no firenen'ny zon'olombelona sy ny revolisionam-bahoaka voalohany indrindra (1789). Ho pejy fandraisana dia nampiasainay ny sary hsodokon'i Delacroix “Ny Fahalalàhana misava làlana ny vahoaka” miaraka amin'ny sainan'ny Revolisiona Siriana mazava loatra
GV: Inona no votoatin'ity pejy ity?
Ho fanampin'ny famintinana ny vaovao isan'andro, dia ezahanay ny mandefa vaovao betsaka araka izay tratra, lahatsoratra sy fandalinana ara-politika izay mahakasika ny Revolisiona Siriana na izany aza. Mamoaka ihany koa izahay, saripika, sariitatra, sary vaventy, sary hosodoko sy lahatsary mifandraika amin'i Syria. Manan-karena raha asa famoronana ara-javakanto, raha tsy hiteny ireo asa fandikàna teny ataonay ihany izay mifanitsy tsara amin'ireo lahatsoratra na sary vaventy. Tena ankafizinay ny fitanisàna ny loharano, ny niaingàn'ny famoahana sy ny anaran'ireo mpanakanto. Amin'ny alàlan'ny sary sy lahatsoratra no ahafahanay mitatitra ireo hetsika sy ny fivoaran'izy ireny, ao Syria.
GV: Ahoana no hitsarànareo ny fifandraisan'ireo mpikirakira aterineto amin'ny Revolisiona Siriana?
Efa mihamaro isa ry zareo ary amin'ny fomba tsy nampoizina no niakaran'ny tàhan-dry zareo. Hatreto dia vitanay ny nahatratra olona manodidina ny 5.000 ary mpikambana maherin'ny 4.000. Ny ankamaroany dia maneho hevitra momba ireo hetsika sy mizara fanaingoana maro ary famoahan-dahatsoratra.
GV: Mba mahazo fandrahonana ve ianareo indraindray noho ny zavatra avoakanareo?
Eny, mazava loatra fa mahazo. Indraindray izahay mahazo faniratsiràna, fanehoan-kevitra feno fankahalàna na fampielezan-kevitra avy amin'ny mpomba ny fitondràna izay mazava ho azy fa fafànay. Misy fepetra mba mifehy ihany ny pejinay – tsy maniratsira, tsy lahatsary na sary mahery setra ary teny faneva hita mazava tsara ny hoe: FIRAISANKINA FAHALALAHANA FAHAMENDREHANA
GV: Miara-miasa aminà pejy hafa ve ianareo sa miasa irery?
Niasa irery nandritra ny fotoana ela izahay, saingy tato anatin'ny volana vitsy lasa dia nisy ireo pejy hafa naniry mafy hiara-miasa aminay rehefa hita ny fahombiazana goavan'ny asanay. Ankehitriny izahay dia miara-miasa aminà Belza, Kanadiana, Frantsay sy Siriana mazava loatra.
GV: Inona no heverinareo fa sisa tavela mbola hatao mba ho ren'ny olona maro kokoa ny Revolisiona Siriana?
FIARAHA-MIENTAN'NY OLONA ERANTANY mba hampiatoana ny fandripahana ny vahoaka Siriana !!!! Mivanàka izahay, diso hevitra sy very toky mihitsy aza amin'ny tsy firaikàn'ny fiombonam-be iraisam-pirenena izay mitazam-potsiny sy mamelà ny hisian'ny famonoana vahoaka mangetaheta fotsiny ny fahafahany hiala amin'ny ziogan'ny famoretana sy ny fitondràna jadona! Tsy manantena inona avy amin'ny governemanta ny Siriana, 18 volana izay no nisian'ilay fitroaram-bahoaka ary ny ONU? Inona no ilàna azy io? Noporofoin'ny governemanta ny tsy fahafahany manampy ny firenenay. Raha toa mba afaka fotsiny manery ny governemantany amin'ny alàlan'ny fanehoan-kery ny olona, manao fitokonana na fientanam-be … angamba mba hitsahatra tsy hilatsaka intsony ny ràn'ireo Siriana novonoina faobe.
Satria ho an'ny vahoaka Siriana: ilainy ny manao izay handrenesana ny feony, ankehitriny sy ho mandrakizay ho amin'ireo Siriana izay nilokaloka hanao fanentanana vahoaka sy ara-pomba demaokratika sady mahatsapa ho tsy misy mpanohana satria ny feon'ny fitaovam-piadiana sy ny tafondro ihany no hany re manako any amin'ny Tandrefana.
GV: Raha ny hevitrareo, tsy matahotra ve ianareo amin'ny hoe mety hampivilana ny tena zava-misy ny vaovao miparitaka amin'ny teny hafa ankoatra ny Arabo? Dika vilana? Tsy fahatakàrana tsara ny tena zava-misy?
Tsia dia tsia!!! Raha ny momba ny pejinay aloha ary na dia tsy matihanina amin'ny fanaovana gazety aza izahay, dia vaovao voamarina sy efa nohadihadiana no avoakanay. Mahafehy tsara ireo fiteny roa izahay, ezahanay ny hanome araka izay tena izy ny endrika tena izin'i Syria.